Amahenjisi Eminyango yeKhabinethi
Ama-hinges we-Oven & Izesekeli
Imikhiqizo yethu ithengiswa ngaphansi kwemikhiqizo emithathu ehlonishwa kakhulu: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Ziyi-drawer system, amaslayidi afihliwe, amaslayidi we-Ball, ama-Slides wethebula, ama-hinges afihliwe, izibambo, ama-hinges amahhavini nezinye izinsimbi zefenisha zehadiwe, ezisetshenziswa kufenisha, amakhabethe, izinto zokusebenza zasekhaya njll.
37-540mm Double Way Okugcwele Ex ...
37-230 mm Isandiso esigcwele ku ...
35mm Isandiso esisodwa 2-Fol ...
Insimbi Engagqwali 430 isikwele ...
Gas Cooker Isitofu umshini Door ...
Isilayidi Esigcwele Sokuvala I-Drawer Esigcwele Samakhabethe Angenalucingo
Isandiso esigcwele se-soft-close downmount drawer slide samakhabethe angenasisekelo - ibhodi le-16mm ekhabetheni ngokuvamile lisetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lokwehlisa idrowa lokusetshenziswa kwezikulufo kanye namapulaki epulasitiki alungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Imodeli No .: I-EUR33A
I-Single Extension Soft Close Undermount Drawer Slide enezikulufu eziguquguqukayo nama-plugs avamise ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lokwehlisa idrowa lokusetshenziswa kwezikulufo kanye namapulaki epulasitiki alungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Isilayidi Esigcwele Sokuvala Esicijile Sokuvalwa Kwentambo
Isilayidi Esigcwele Sokuvala Esingaphansi Sokuvalwa Kocingo Oluyinsimbi esivamise ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwezikulufu zokusebenzisa isilayidi sensimbi ukulungisa idilowa lobhasikidi. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, ngomqondo ophakeme wedizayini ithimba lethu elihle kakhulu lobuchwepheshe lakha ngokucophelela i-exquisite kanye nomphathi wehadiwe le-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Ukuthula okuthambile okusendayo kwehlisela phansi ikhabethe lesilayidi isandiso esigcwele ngeziqeshana zangaphambili ngokuvamile zisetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwesilayidi sokwehlisa ukusetshenziswa lusebenzisa obakaki bangaphambili ukulungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
I-Single Extension Soft Close Undermount Drawer Slide enezixhumi zangaphambili zivame ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwesilayidi sokwehlisa ukusetshenziswa lusebenzisa obakaki bangaphambili ukulungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Ukunwetshwa okugcwele okuhambisanayo okuhambayo okuvala okufihliwe okugijimayo umgijimi onobakaki bangaphambili be-3D ngokuvamile basebenzisa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lokwehlisa idrowa lokusetshenziswa kwesilayidi kubakaki langaphambili lukulungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Ukuthengisa okushisayo kweChina Oven Parts Traditional Design Oven Door Hinges
Isingeniso: Umnyango owodwa wehhavini lendlebe yokupheka ihhavini lomnyango kungakwesokunxele nangakwesokudla izinhlangothi ezimbili. Ingibe isetshenziselwa iminyango yehhavini yokupheka igesi. Izinsimbi zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-01
I-37mm islayidi esigcwele / kathathu sesandiso setelescopic bayonet mount drawer slide
Isilayidi se-37mm esigcwele / kathathu esandisiwe sesibonakude i-bayonet mount drawer ekhiqizwa umugqa wokukhiqiza wokunemba okuphezulu kanye nemikhiqizo yezinsimbi zokuhlola ezisebenza ngokuthula nokuthula. Mayelana nesilayidi sethu sokuthwala ibhola sinobubanzi obuhlukile be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ngobude esingakwazi ngokuya ngezidingo zakho ukukhiqiza. Uma unentshisekelo kuziteshi zethu ze-telescopic, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: YA-3703
Ithuluzi lama-37-230 mm lebhokisi lesandiso eligcwele ibhokisi lekhabethe eliphethe i-bayonet mount drawer slide
Ithuluzi lama-37-230 mm lebhokisi lesandiso eligcwele ibhokisi lekhabethe eliphethe i-bayonet mount drawer slide ekhiqizwa umugqa wokukhiqiza wokunemba okuphezulu kanye nemikhiqizo yezinsimbi zokuhlola ezisebenza ngokuthula nokuthula. Mayelana nesilayidi sethu sokuthwala ibhola sinobubanzi obuhlukile be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ngobude esingakwazi ngokuya ngezidingo zakho ukukhiqiza. Uma unentshisekelo kuziteshi zethu ze-telescopic, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Isibonelo No.: YA-37HK-230
I-37-540mm Double Way Full Extension Bayonet Mount Ball Bearing Toolbox Drawer Slide
I-37-540mm Double way isandiso esigcwele i-bayonet mount ball bearingboxbox drawer slide ekhiqizwa umugqa wokukhiqiza wokunemba okuphezulu kanye nemikhiqizo yezinsimbi zokuhlola ezisebenza ngokuthula nokuthula. Mayelana nesilayidi sethu sokuthwala ibhola sinobubanzi obuhlukile be-17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ngobude esingakwazi ngokuya ngezidingo zakho ukukhiqiza. Uma unentshisekelo kuziteshi zethu ze-telescopic, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: YA-37HK-540
Isandiso esigcwele ukukhweza phansi PUSH TO OPEN drawer slides with locking device
Isandiso esigcwele ukukhweza phansi PUSH TO OPEN drawer slides with locking device usually use for kitchen & bathroom cabinets. Lolu hlobo lokwehlisa idrowa lokusetshenziswa kwesilayidi sokukhiya isiqeshana sedivayisi kumadilowa okhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Imodeli No .: I-EUR33D
Ukucindezela okugcwele kokuvula ukuvula ngaphansi kwamaslayidi we-mount drawer ngezikhonkwane eziguquguqukayo kuvame ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lokwehlisa idrowa lokusetshenziswa kwezikulufo kanye namapulaki epulasitiki alungisa kumadilowa wokhuni. Umnikazi womshini we-TAIWAI wokunemba okuphezulu, onomqondo wokuklama ophakeme ithimba lethu lobuchwepheshe elihle kakhulu lenza ngokucophelela i-hardware enkulu kanye nomphathi we-GERISS okungukukhetha okuhle kakhulu kwezinkampani zefenisha zomhlaba.
Gxila ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni izesekeli zehadiwe zehadiwe
Ucingo: + 86-21-66368006